Paypal inopinda mumusika we cryptocurrency, ikozvino zvichave nyore kushandisa bitcoins | Kubva kuLinux
PayPal yakazivisa kupinda kwayo mumusika we cryptocurrency mazuva mashoma apfuura, maererano nemishumo yakawanda. Nezvo, PayPal vatengi vanozogona kushandisa cryptocurrencies kutenga mune vatengesi mamirioni makumi maviri nematanhatu mumambure ayo kutanga kutanga kwa2021, kambani yakati.
Sevhisi nyowani inoita kuti PayPal ive imwe yemakambani makuru muUS inopa vatengi mukana wekuti vawane mari yemadhora, iyo inogona kubatsira Bitcoin uye kukwikwidza mari yemadhora kuti ive inogamuchirwa senzira dzekubhadhara dzinoshanda.
Pakutanga anotsigirwa ma tokeni anosanganisira Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH), Bitcoin Cash BCH uye Litecoin (LTC), iyo kambani yakati.
Iko hombe yekubhadhara mhando yakabatana nayo Paxos yekupa sevhisi uye ndokuwana ine marezenisi emari yedhijitari kubva kuNew York State Dhipatimendi reMari, inowanzozivikanwa seBitLicense.
Kuwedzera kune crypto kubhadhara, Vashandisi vePayPal vanozokwanisawo kutenga mari yedhijitari zvakananga kuburikidza neapp. Naizvozvo, PayPal ichapa iyo cryptocurrency chikwama, ichibvumira vashandisi kutenga, kutengesa, uye kubata cryptocurrencies kuburikidza nePayPal kunyorera.
Iyo San Jose, California-yakavakirwa kambani inotarisira kuti sevhisi ichasimudzira kushandiswa kwepasirese kwema cryptocurrens uye kugadzirira network yayo yemari nyowani yemadhijitari ayo emabhangi epakati nemabhizinesi anogona kuvandudza, akadaro Mutungamiriri uye CEO Dan Schulman. Muhurukuro.
"Tiri kushanda nemabhangi epakati uye tichifunga nezvemhando dzese dzemari yedhijitari uye kuti PayPal ingatamba sei," akadaro.
Vabati veakaundi yeUS vachakwanisa kutenga, kutengesa uye kubata mari yecryptocurrencies muzvikwama zvavo zvePayPal zvemavhiki anoverengeka anotevera, kambani yakati. PayPal inoronga kuwedzera sevhisi kune yayo peer-kune-peer kubhadhara application Venmo uye nedzimwe nyika shoma mukati mehafu yekutanga ya2021.
Iko kugona kubhadharisa ne cryptocurrencies ichave ichiwanikwa kubva kutanga kwegore rinotevera, yakadaro kambani.
Mamwe makambani echinyakare fintech, senge nharembozha mupi Square Inc uye stock stock app kambani Robinhood Markets Inc, inobvumira vashandisi kutenga nekutengesa macryptocurrencies, asi kuvhurwa kwePayPal kunozivikanwa nekupihwa saizi yayo.
Bitcoin yakasvika padanho repamusoro kubva muna Chikunguru 2019 munhau. Chekupedzisira, yaive yakakwira 4.8% kusvika $ 12,494, ichiunza iyo yekutanga uye hombe kukura kwe cryptocurrency pamusika pamusoro pe75% yegore.
Vatambi mumusika we crypto vataura kuti saizi yePayPal inoreva kuti zano racho richabatsira pamitengo ye bitcoin.
"Kukanganisa kwemitengo kunowanzove kwakanaka," akadaro Joseph Edwards weEnigma Securities, yekambani yemari yemari muLondon. "Hapana kuenzanisa maererano nekugona kuburitswa pakati pekubatsirwa kwePayPal kupihwa uye nechero ipi yakapihwa yapfuura."
Bitcoin uye mamwe ma cryptocurrensets akatambura kuti vazvimisikidze senzira dzekubhadhara yakashandiswa zvakanyanya kunyangwe yavepo kweanopfuura makore gumi. Iko kusagadzikana kwema cryptocurrensets kunokwezva kune vanofungidzira, asi kunopa njodzi kune vatengesi nevatengi. Shanduko zvakare inononoka uye inodhura kupfuura mamwe maitiro echinyakare ekubhadhara.
PayPal inotenda kuti yayo nyowani sisitimu ichagadzirisa aya matambudziko, sekubhadhara kuchazogadziriswa pachishandiswa mari yechinyakare, senge dhora rekuUS. Izvi zvinoreva kuti PayPal inobata njodzi yekuchinja kwemitengo uye kuti vatengesi vanogashira mari yekubhadhara.
Nezvo, zvakare PayPal yabvisa kubva paFacebook's Libra chirongwa, sezvo aive mumwe wekutanga nhengo dzesangano reLibra. Iyi purojekiti inozopedzisira yabvumira vashandisi vayo mabhiriyoni maviri kuti vatenge zvinhu kana kutumira mari zviri nyore senge meseji pakarepo. Asi matambudziko akasangana nevatongi vanokanganisa kutenderera pasirese Ivo vatungamira vamwe vevamwe vako kuti vafungezve rutsigiro rwavo rweichi chirongwa. Saka muna Gumiguru 2019, PayPal yakafunga kuzvibvisa kubva pamazita emakambani akatsigira chirongwa ichi.
Kubviswa kwePayPal uku kwakaita kuti kambani ive yekutanga nhengo kusiya Facebook's Libra association.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Paypal inopinda mumusika we cryptocurrency, ikozvino zvichave nyore kushandisa bitcoins
Git 2.29.0 inosvika neruyedzo rutsigiro rweSHA-256, kugadzirisa uye nezvimwe